waa maxay 192.168.1.245?
The 192.168.1.254 waa cinwaan gaar ah IP taas oo macnaheedu yahay kor u la qabsan doonaa in ay kala duwan oo gaar ah oo loo celiyey ka IANA (Authority Internet Hawsha Numbers) sida kala duwan ee gaarka loo leeyahay. sida caadiga ah, markii aannu iibsan router cusub ama modem ay siin username iyo password. username iyo password aad ka xidhiidhada dheeraad ah u ilaalin doono.
Laakiin mararka qaarkood waxaa jira xaaladaha qaarkood oo aan soo gaarto la illoobin sirta ah oo ka mid ah modem gaar ah ama router. Sidaas waxa aad samayn karto wakhtigaas, Waxaan qabaa waxaa laga yaabaa inaad dhib aad u badan, sababtoo ah ma aad heli kartaa router. Laakiin uma baahna in aad walwasho, article maanta waxaan u tegayaa inaan ku siin qaar ka mid ah Hanuuniyaa iyo talooyin muhim ah oo kaa caawin doona inaad si ay u xaliyaan, kuwaas oo dhan nooca dhibaatooyinka iyo waxaad awoodi doontaa inaad bedesho password aad si deg deg ah ay noqon doontaa.
192.168.1.254 IP Address waxaa loo adeegsan karaa modem, router, iyo aalado kale oo fara badan sida websaydhyada iyo DVRs. Waa cinwaanka IP default of guddi ay gacanta ku yaal oo dhan router Cisco iyo xeesha. Isticmaalayaashu si dhakhso ah ayey u gali karaan golahan kontaroolada markay soo galaan 192.168.1.245 IP Address galay URL bar internet bog furaha ah.
Tani 192.168.1.254 Ciwaanka IP: ga waxaa inta badan loo isticmaalaa by router casriga ah sida router ADSL Thompson, daaro Linksys, TP-Link router Alcatel ADSL Moodeemka, 3router com, Westell ADSL Moodeemka, 2Wire router, balaayiin ADSL ee router, SRW2023 oo badan router more.
Qaar ka mid ah noocyada in faa'iideysan 192.168.1.254 waxaa ka mid ah:
Billion router / Moodeemka
Westell DSL Moodeemka (US KELIYA)
Netopia / Cayman Kaddinadda
Qaar ka mid ah Linksys router / Moodeemka
3Com router / Moodeemka
Maxaa la sameeyaa haddii aad Ilowday aad cinwaanka IP Username Password iyo?
Saaxiibbaday way, First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad damiso routerka. Next, waa inaad riixdaa oo aad qabataa batoonka dib-u-dejinta ee galka gadaal laakiin inaad sameyso waxaad u baahan tahay pin, ama hareer ka dibna noqda router ah. Laakiin ma lumin button keddibna iyo aad leedahay si ay u sii on haysta button ee ku saabsan 5- 10 ilbidhiqsiyo kadib markii aad badasho routerkaaga. Ka dib markaa kadib waad sii deyn kartaa badhanka oo sug inta qalabku dib u bilawdo. Hadda waxaad la xiran kartaa PC ama laptop aad router dhex cable network ama adigoo isticmaalaya a xidhiidha Wi-Fi.
User ID Most Common iyo List Passwords
Inta badan Common Id ee & passwords
ma jiro / ma jiro
admin / ma jiro
Maamulaha / ma jiro
admin / maran
Default usernames iyo Passwords
Model router Username / Password
2Wire ma jiro / ma jiro (ama) bannaan / maran
Aztech admin / admin (ama) user / user (ama) bannaan / maran
billion admin / admin (ama) admin / password
Motorola admin / password (ama) bannaan / Motorola (ama) admin / admin
Netopia admin / 1234 (ama) admin / admin (ama) admin / password (ama) admin / maran
SparkLAN bannaan / maran
Thomson Maamulaha / CPE.hgw.12 (ama) Maamulaha / ma jiro (ama) admin / admin (ama) ma jiro / ma jiro (ama) bannaan / admin
Westell admin / password (ama) admin / admin (ama) admin / maran
Linksys admin / admin (ama) admin / ma jiro
Netgear ma jiro / default
Sitecom sitecom / sitecom (ama) bannaan / sitecom
Thomson Maamulaha / ma jiro (ama) admin / admin
ki gigabyte bannaan / maran (ama) admin / admin (ama) bannaan / admin
Sida loo Beddel router Password?
Haddii aad Boogaadin si ay u gasho in aad router admin guddi. markaa fadlan kuqul qulqulkaan hoose ee soo gal routerka oo dhameystiran talaabada y.
password The default for router waa admin iyo username waa laga tegi maran. Ujeedada ammaanka, furaha sirta ah ee 'router' waa in loo badalaa eray sir adag.
STEP 1: First of dhan, tag bogga Mudanayaasha ee router ah.
STEP 2: Markaas riix tab Maamulka.
STEP 3: Markaas ka qaybta maamulka, aad u baahan tahay in ay galaan password cusub ee beerihii router Password iyo Dib-u-gala in Xaqiiji.
STEP 4: Ugu dambaysta wuxuu, aad u baahan tahay si ay u riix galay doorasho Save Settings. In ay! Tani waa hab sahlan oo dib iyo bedesho Password router.
Taasi waxay ahayd oo dhan oo ku saabsan 192.168.1.254 Cinwaanka IP Default router Username & password. Waxaan Rajaynaynaa in aad guys u eg this post, laakiin haddii aad soo food saartay dhibaato kasta oo ku saabsan this post, fadlan faallo na waxaan isku dayi doonaa si ay u xaliyaan dhibaatadaada waayo, sida ugu dhakhsaha badan, mahad booqanaya our site.
Post Previous:Waa maxay 192.168.0.0 IP Address?
Post Next:192.168.2.1 username & password – 192-168-1-1l.com